Isku-darka midabada jikada ee jikada - Kitchen Cabinets Color Combination
Home Isku-darka midabada jikada ee jikada
Jikada waa meesha ugu muhiimsan ee isku-xirnaanta gurigaaga; labadaba si aad ugu qanacdo iyo sidoo kale dib u soo kabashada. Sidaa darteed xulashada xarkaha saxda ah ee armaajooyinka jikadaadu waa aasaasi. Kuwo badan ayaa dib-u-habeyn ah ama waxay doorteen qorsheyaal dabaq ah kuwaasoo jikada ku daraya aaggaga caadiga ah, oo had iyo jeer ma jiraan khaasatan jikada / cunidda / golayaasha Sameynta xafiisyada xaraashka doorka waa qeyb muhiim ah oo lagu meeleeyo xaalada maskaxda iyo raali ahaanshada meelaha muhiimka ah ee aad ku nooshahay. Sidaas noqo oo ay suuragal tahay, xulashada ruxitaanka saxda ah ee jikadaada ayaa aad uga adag sidii laga fili lahaa. Tani waxay si joogto ah u riixeysaa kuwa haysta hantida inay doortaan Vanilla.
Waa maxay Sababta aad uga Fikirayso inaad u Isticmaasho Midab Aan Ahayn Mid Aan Ka Shaqaynaynin Booyadahaaga
Kuwa sida caadiga ah amaahda guryaha u haysta ayaa ka caga jiidaya inay ka fikiraan meel ka baxsan (Waxaan soo qori doonaa baloog dambe habka ugu kartida badan ugunayaraan gadhka jikada ee qadhaadhka ah ee cajiibka ah) maadaama ay cabsi qabaan waxay saameyn ku yeelan kartaa qiimeynta dib-u-eegis dambe. Waxay si gaar ah ugu qanacsan yihiin armaajooyinka jikada jikada iyadoo ay ugu wacan tahay muhiimada jikada aan caadiga ahayn inay guri iibiyaan. Runtii, jikada ayaa ah fikirka ugu weyn ee iibsadayaasha.
Ganacsadayaashu waxay si joogto ah u maleeyaan in fursadda off-ka ah ee ah inay gurigooda ka dhigaan mid si ballaadhan uga qaybqaata inay jiri doonaan xamaasad badan. Sababaha caadiga ah ayaa ka dhaadhicin doona in kuwa wax iibsada ee suuragalka ah ay qiime ka qaalisan uu ganacsaduhu heli doono. Si kastaba ha noqotee, way dayacan tahay tixgelinta tirada tabarucaadaha la heli karo ee suuqa iyadoo la isticmaalayo habkan u dhigma ee isugeynta ah ee ku saleysan. Runta arrinta ayaa ah in socdaal aan kala go ‘lahayn ay ina tusinayso in inkasta oo ay jiri doonto saldhig aad u ballaadhan oo iibsadayaashu ay jiri doonaan xulashooyin isku mid ah oo isa soo taraya.
Qaab dhismeedka weyn waa qorshe weyn; iyadoo maskaxda lagu hayo in aragtiyo kaladuwan ay wax ka qaban doonaan shakhsiyaad yar oo ay wax ka qaban doonaan shakhsiyaadkaas heer aad u qoto dheer. Waxaad sidoo kale yeelan doontaa faa iidada aad uga hortagayso xulashooyinka xulashada ah ee maskaxda shakhsiyaadkaas; taasina waa habka aad ugu iibiso gurigaaga wax dheeraad ah.
Waxa muhiimka ah waa inaad qurxisid jikadaada sidaa darteed xulo xaraashka oo dhammeystiraysa awooddaada. U dhaqaaq inaad sameyso waxa kuwa kale runtii aysan ahayn. Dhammaan qeybaha waa inay horumar ku gaaraan jihada ujeedka qaab dhismeedka adag. Qaab dhismeedka weyn waxaa lagu xiraa addin garabka, wadida wadista, iyo inaad ku dhufato rabitaankaaga qaab aad adigu iska leedahay.
Qodobbada xiisaha leh Markaad dooranayso midab oo loogu talagalay kiishashka jikada
Marar badan waxaan sheegnaa in “guriga uu doorto shaandhaynta” iyo xulashada xishoodka weyn ayaa si isa soo taraysa uga hadha tuurista, dhacdo kasta marka ugu horeysa ee la bilaabo hawsha.
Tixgeli waxyaabaha aan la beddeli doonin. Waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay khadadkaaga hada jiifa / kuwa gadaal ka riixaya iyo qalabka laga soo galo ama waxaad leedahay xoogaa dhagax ah ama shaqo leben ah qolka isku xira. Waa inaad doorataa xaraash kaas oo ku bogaadin doona rakibaaddaan aan isbeddellada lahayn. Waa inaad ogaataa saamaynta uu nalka qolka ku yeelan doono hooska qeybiyeyaasha. Miyay sifiican u muuqataa?
Radiant? Dhalasho? Isugeyn labo ah ?? Laydhku wuxuu saameyn ku yeelan doonaa sida hadhku u muuqdo, muuqaalkuna sidoo kale wuu is beddali doonaa muddada maalinta iyo habeenku marka ay isku dhafka iftiinka isu beddelaan.
Si joogto ah u samee tusaale ahaan soo gelitaan si aad u siiso kiis wakiil aad u weyn oo ka mid ah ruxitaanka.
Waqtigan xaadirka ah waxaad u badan tahay inaad fahamtay in mid ka mid ah qaababka ugu caansan ee si weyn u beddelaya jikadaada (iyo aragtiyaha kala duwan ee gurigaaga) qiimaha macquulka ah waa adigoo rinjiyeey armaajooyinka jikadaada. Waxay ahayd si gaar ah 10 sano ka hor in maple iyo oak-kabbolada dib loo soo celiyo ay ahaayeen go’aankii ugu caansanaa si kastaba ha ahaatee rinjiyeynta koobabka koobabka ayaa si dhaqso leh ugu beddelay heerka.
Waxaan dib u soo nooleynay heshiisyo badan oo jikada jikada (iyo armaajooyinka qubayska, iyo wixii la mid ah) ee ku yaal Cleveland, OH zone iyo mid ka mid ah weydiimaha sida weyn loo aqoonsan yahay ee aan helno waa waxa shaandhaynta leh ee la xusho. Halkan waxaa ah qayb ka mid ah moodallada aannu door bidnay (dhammaantood waxay ka socdaan shaqadeenna) oo ay weheliso caddeyn si aad awood ugu yeelatid inaad doorato waxa gurigaaga ugu fiican. Haddii aadan ka fikirin inaad dib u soo xusuusatid, goortaad dooraneyso midabka kareemka ah ee inta badan qaababka kala duwan ee qolka ay saameyn ku yeeshaan sida ugu fiican. Mid ka mid ah shaandhayntu waxay u ekaan kartaa mid cajiib ku ah jikada qof kale laakiin aan adiguna ku jirin.
Qolka jikada ee jikada cad
Caddaan wali waa shayga ugu caansan ee loo yaqaan sida ay u ahayd dhacdo kasta shan sano ama meel u dhow. Mid ka mid ah sababta cad ayaa u ah isbadellada guud ee guud waxay salka ku haysaa inay ka dhigto inta badan fikradaha kaladuwan ee jikada, (tusaale ahaan, saqeeyeyaasha iyo tirinta). Kabadhada rinjiyeyaasha ah ee rinji waxay sababi karaan jikada yar inay u ekaato mid weyn si fudud sida rinjiyeynta qeybiyeyaasha sida hoos u iftiimaya uu sameyn karo.
Boorarka rinjiga ee rinjiga / kiriimka leh
Xaraashka labaad ee xafiisyada ugu caansan waa cirrid ama kareem. Guryo badan ayaa kubad qurux badan oo bir dhalanaya jikada jikada laga dheehan karaa si aad u qurux badan. Tani waa si joogto ah xaaladda haddii inta soo hartay ee jariimka guriga ay dhalaalayaan ama haddii tirinta ama dusha sare ee jikada ay ku taal dhinaca diirimaadka kala-soocidda. Tusaale ahaan, haddii ay tiriyeyaashaadu leeyihiin codad badan oo midab madow ama huruud huruud ah leh, markaas u fiirsashada xiireydu waxay noqon kartaa sharaf qaali ah.
Hawlaha xaraashka ayaa si xushmad leh leh (oo xitaa u muuqda kuwa ka sii quruxsan) jikada iyadoo loo eegayo qaabab kala duwan. Maaddaama kala qeybiyayaashu ay yihiin hooska cagaaran oo dhabarka dambe uu leeyahay codad badan oo midabyo mugdi ah, hadalladan cirridka leh ayaa aad u bogaadiya.
Rinjiyeynta Qolka Kushiinka Madoow
Dim waa qoyska xiirashada ugu caansan ee xaraashka qeybiyeyaasha, si kastaba ha ahaatee ma u tahay garka ugu fiican ee armaajo jikadaada? Xaqiiqdii waa go’aan caan ah hase yeeshe waxay u muuqataa in ay ‘xoogaa caan ku tahay’ cad iyo midab madow. Si lamid ah sida wixii xiirashada ah waxay si dhab ah ugu tiirsan tahay inta ka hartay qurxintaada sida sagxadaha iyo gogollada. Iftiimin khafiif ah iyo mugdi mugdi ayaa labaduba caan ku ah armaajooyinka. Qalooc jilicsan ayaa si gaar ah ufiican karo xoogaa yar oo khaanadaha koobabka ah, tusaale ahaan, rinjiyeynta jasiiradda ama si fudud khaanadaha hoose ee ruxaya.
Qolka jikada ee Rinjiga Buluugga ah
Dhacdooyinka aad hadda haysatid ton oo cufan oo cad oo jikadaada ku jira, qaab kale oo cajiib ah oo aad ku buuxin karto armaajooyinkaaga ayaa noqon kara mid awood badeed buluug ah. Tan waxaa sifiican looga faa iidaysan karaa qayb kamida armaajooyinka halkii midkasta oo ka mid ahi wali noqonkaraa farxad xiiso leh oo muhiimad isku xirnaan ah. Tani shaki la’aan maahan qof walba oo waxaa ku xigi doona inuusan si fiican u gaarin 5 sano ama sidaa darteed si kastaba ha noqotee waqtigaan (2018) waa bedel dhab ah oo runtii ah.
Midabada cagaarka ah ee jikada jikada
Mid ka mid ah xulashada shaandhaynta ugu dambeysa ee la muujiyo waa hooska cagaaran. Sida ciidamada badda oo kale oo buluug ah, tani waa doorasho sii kordheysa oo muuqaal ah oo keli ku shaqeysa guryaha gaarka ah. Xiirashada noocan ahi waxay ka shaqeyn kartaa guryaha iyadoo leh dhamaan codadka diiran, tusaale ahaan, hooska beige. Waxaa intaa sii dheer waxay u badan tahay inay sifiican ugu shaqeyso midab yar oo hodan ah halkii cad oo cad.
Sida ugu habboon ee maqaalkani wuxuu kuu horseedaa inaad naqshadeyso khaanadda sawirka qolka jikada. Waxaa jira tiro badan oo ah qaabab kale oo aan caadi ahayn oo la heli karo iyo midka ugu fiican oo runtii kugu tiirsan dhadhankaaga iyo himilooyinkiisa kala duwan ee jikadaada. Dhacdada aad ku nooshahay aagga Cleveland, waxaan jeclaan lahayn fursadda aan kaala hadalno wax ku saabsan rinjiyeynta armaajooyinka jikadaada. Waxaad ka baran kartaa nidaamkayaga boggayaga Sawirka ee Golaha.